Tungsten Heavy aluminiyamu - Luoyang zakha Tungsten-Molybdenum Material Co., Ltd.
ezixineneyo, formability egqwesileyo kunye machinability, nokumelana obalaseleyo, modulus eliphezulu luthambe, conductivity enomtsalane thermal nokwandiswa thermal ephantsi. Sinikela: Tungsten aluminium zethu metal enzima.
"Heavyweights" wethu asetyenziswa, umzekelo, kwi eyama kunye aerospace mveliso, iteknoloji zonyango, amashishini izithuthi kunye Foundry okanye oyile negesi kusombiwa. Sele langoku ezintathu kwezi zingezantsi:
Tungsten yethu aluminiyamu heavy metal W-Ni-Fe kunye W-Ni-Cu ube mninzi kolube phezulu (17.0 ukuya 18.8 g / cm3) nokubonelela uvikele enokuthenjwa nxamnye X-reyi kwaye radiation gamma. Zombini W-Ni-Fe kunye zethu eziphathekayo non-magnetic W-Ni-Cu zisetyenziselwa uvikele umzekelo isicelo zonyango kodwa kushishino oyile negesi. Njengoko collimators kwizixhobo therapy radiation ukuba baqinisekise ukuba sesichengeni echanileyo. Xa uthwele ezisindayo ukusebenzisa lexinene ingakumbi ophezulu Tungsten heavy metal intsila yethu. W-Ni-Fe kunye W-Ni-Cu ukwandisa kuphela encinane kakhulu kwiqondo lobushushu eliphezulu kwaye uthothe ubushushu kakhulu kakuhle. Njengoko izinto ezifakelwa babumba kumsebenzi aluminiyam Foundry, banoku cinywa ngokuphindaphindiweyo shushu kwaye zipholile ngaphandle kokuba krobo.
Xa Machining Ukuchithwa Electrical (EDM) inkqubo, zimbiwa ngomshini ukuba inqanaba kakhulu ngendlela esebenzisa ugesi phakathi workpiece ne electrode. Xa yobhedu grafayithi electrode azikho msebenzi, anxibe-enganyangekiyo electrode Tungsten-copper- bayakwazi kumatshini nokuba nzima isinyithi ngaphandle kobunzima. Xa plasma nemilomo isitshizi kushishino daka lo, iimpawu eziphathekayo Tungsten nobhedu kwakhona zongeza omnye komnye ngokugqibeleleyo.
Wangena ebuntsimbi Tungsten enzima luqulathe amacandelo amabini eziphathekayo. Ngexesha inkqubo yokuvelisa kwisigaba-mbini, isiseko aneentunja sintered kuqala eveliswa akwicandelo le ngongoma yokunyibilika eliphezulu, umzekelo metal elinjubaqa, phambi kokuba pores ezivulekileyo ke wangena kunye icandelo liquified kunye ngongoma kwawe. Iimpawu amacandelo ngamnye kuhlala ingatshintshanga. Xa kuhlolwa phantsi ngemicroscope, iimpawu ngalinye leekhomponenti kuqhubeka kucaca. Kwinqanaba kokukhulu, nangona kunjalo, iimpawu macandelo ngamnye kuhlanganiswa. Njengoko izinto ebuntsimbi hybrid, impahla entsha, umzekelo, ilifa conductivity thermal ezintsha amaxabiso ukwanda thermal.
phase-sintered Tungsten-enzima iintsimbi alulwelo enziwa kwi umxube emigutyeni metal kwinkqubo yemveliso olunye-ngexesha apho amacandelo ngamanqaku kwawe ukuba kunyibilike phezu kwabo lokunybilika aphezulu. Ngethuba lesigaba Umatshini, la macandelo benza aluminium kunye nabo baba kwindawo yokunyibilika ephakamileyo. Nokuba isixa enkulu Tungsten, leyo ingongoma eliphezulu yokunyibilika, ixutywe ngexesha lesigaba yokubopha. Isigaba ulwelo izixhobo ezijongeneyo sintered Plansee bayangenelwa mninzi candelo Tungsten i kaThixo, modulus of luthambe kunye ikhono lokunciphisa X-reyi kwaye radiation wesigrike ngaphandle abanalo naluphi na kubakho iingxaki ezinxulumene kunye nokuqwalaselwa Tungsten ecocekileyo Ngokwahlukileyo koko, 'ngumlingani lokwanda thermal kunye conductivity thermal kunye zombane yeekhomponenti phase-sintered ulwelo kuxhomekeka ngezinga elikhulu kakhulu ekwakhiweni inxaxheba kwisigaba yokubopha.
Back-uphose izinto ngaxeshanye oludibanisa iimpawu eziphathekayo macandelo izinto ezimbini ezahlukeneyo. Ngethuba lale nkqubo, izinto ngokwabo bayagcinwa isekwimo sazo bakhonkxwa kuphela esisiphambuka obhityileyo. Le zimbiwa edidekile ngendlela sokubumba ukwenza umanyano micrometers nje ezimbalwa ubukhulu. Ngokungafaniyo welding kunye ngelotha ubuchule, le ndlela ingakumbi sizinzile kwaye iqinisekisa Uhanjiso elilelona thermal.
Tzm Sheet, Tzm Plate, Molybdenum, Molybdenum Intonga, Molybdenum Sheet, Molybdenum Plate,